Iskuulada K-8, waxaan fiirineynaa boqolkiiba ardayda ay aadka u yaqaanaan xisaabta & aqrinta MCA iyo sidoo kale boqolkiiba ardayda ay ka korayaan tacliin ahaan xisaabta iyo aqrinta sida ay qabto MCA. Dugsiyada sare, waxaan eegeynaa boqolkiiba ardayda qalin jabineysa iyo dhameystirka sanadkooda 2aad ee kulleejada iyo sidoo kale celceliska celceliska dhibcaha ACT. Mid kasta oo ka mid ah 3-dii sano ee ugu dambeysay xogtan * waxaa la barbardhigaa celcelis bilow ah ee Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis (MPS) iyo gobolka. Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis iyo celceliska gobolka waa isku celcelis xog ah laga soo bilaabo 2015-2017, markii aan bilownay xisaabinta qiimeynta tacliinta. Haysashada celceliska MPS iyo isku celceliska gobolka isla waqtiga ayaa noo oggolaanaya inaan si muuqata u aragno horumarka.
WAXQABADKA SARE ee dugsiyadu waxay leeyihiin boqolkiiba sare ardayda dhigata heerka fasalka ama sameynaya horukac tacliimeed marka loo eego celceliska gobolka, 2 ka mid ah 3dii sano ee la soo dhaafay.
WAXQABADKA DHEXE ee dugsiyada waxay leeyihiin boqolkiiba ka hooseeya ardayda ku jirta heerka fasalka ama sameynaya hormar tacliimeed marka loo eego celceliska Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis laakiin aan ku jirin 25% ugu hooseeya dugsiyada boqolkiiba ardayda ku jirta heerka fasalka AMA sameynaya horumar waxbarasho, 2 ka mid ah 3 sano ee la soo dhaafay,
WAXQABADKA HOOSE Dugsiyadu waa kuwa ugu hooseeya 25% ee dugsiyada magaalada boqolkiiba boqolkiiba ardayda ku jirta heerka fasalka AMA ama sameynaya horumar tacliimeed, 2 ka mid ah 3dii sanno ee la soo dhaafay,
CARQALADAHA WAXQABADKA HOOSE Dugsiyadu waa kuwa ugu hooseeya 25% ee dugsiyada magaalada boqolkiiba boqolkiiba ardayda ku jirta heerka fasalka AMA ama sameynaya horumar tacliimeed, 2 ka mid ah 3dii sanno ee la soo dhaafay,
Dugsiyada CUSUB iskuuladu ma hayaan xog sannado ku filan oo ay ku helaan qiimeyn.
Xog KALE oo xaddidan, barnaamijyo kale ama iskuul cusub
WAXQABADKA SARE Dugsiyada sare waxay leeyihiin boqolkiiba sare ee ardayda ku adkeysanayay sanadkooda 2aad ee dugsiga sare kadib (kulleejada) marka loo eego celceliska gobolka, AMA celcelis ahaan dhibcaha ACT waxay ahaayeen 21 ama ka badan, 2 ka mid ah 3dii sanno ee la soo dhaafay.
AWOODDA SARE Dugsiyada sare waxay leeyihiin boqolkiiba sare ee ardayda ku adkeysanayay sanadkooda 2aad ee dugsiga sare kadib (kulleejada) marka loo eego celceliska gobolka, AMA celcelis ahaan dhibcaha ACT waxay ahaayeen 18 ama ka badan, 2 ka mid ah 3dii sanno ee la soo dhaafay.
WAXQABADKA DHEXE Dugsiyada sare waxay leeyihiin boqolkiiba sare ee ardayda ku adkeysanayay sanadkooda 2aad ee dugsiga sare kadib (kulleejada) marka loo eego celceliska gobolka, AMA celcelis ahaan dhibcaha ACT waxay ahaayeen 25 ama ka badan, 15, 2 ka mid ah 3dii sanno ee la soo dhaafay.
WAXQABADKA HOOSE dugsiyadu waa kuwa ugu hooseeya 25% ee dugsiyada magaalada boqolleyda ardayda ku adkeystay sanadkoodii 2-aad ee dugsiga sare kadib (kulleej), 2 ka mid ah 3-dii sano ee ugu dambeysay AMA celcelis ahaan dhibcaha ACT ay ka hooseeyaan 15, 2 ee 3-dii sano ee ugu dambeysay.
CAQAVADAGA WAXQABADKA HOOSE dugsiyadu waa kuwa ugu hooseeya 25% ee dugsiyada magaalada boqolleyda ardayda ku adkeystay sanadkoodii 2-aad ee dugsiga sare kadib (kulleej), 2 ka mid ah 3-dii sano ee ugu dambeysay AMA celcelis ahaan dhibcaha ACT ay ka hooseeyaan 15, 2 ee 3-dii sano ee ugu dambeysay.
Qiimeynta tacliinta ee dugsiyada K-8 waxaa lagu wargeliyaa 3 sano xogta MCA, &, loogu talagalay dugsiyada sare, isku darka dhibcaha ACT & ku adkeysiga kuleejka.
* Sannadkan, iyadoo ay ugu wacan tahay MCA oo aan la maamuli karin guga 2020-ka sababo la xiriira COVID-19 xogta horumarka iyo aqoonta ee MCA waxay ka timid sanad-dugsiyeedka 20-21.
* Sannadkan, iyadoo ay ugu wacan tahay MCA oo aan la maamuli karin guga 19-ka sababo la xiriira COVID-2020 xogta horumarka iyo aqoonta ee MCA waxay ka timid sanad-dugsiyeedka 20-21.